Ị nwere ike gbara iche iche raw vidiyo site iPhone ma na-achọ iji kpochapụ na-achọghị ebe na-akpakwa isi ihe. Ma ọ bụ nwere ike ị chọrọ wepụ manụ ókè-ala-emeputa nke ichegbu video ụtọ ma na-elu-enweghị isi ohere. Video cropping bụ ụzọ na-aga. A ebughibu na anabata video ngwá ọrụ, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nwere ike mee ka ọrụ a n'ime apụghị iru nke mmadụ nile. Ọ na-akwado akuku 16: 9, 4: 3 na ahaziri akụkụ ruru nkiri na iPhone videos. Ka anyị hụ otú ihe ubi iPhone video na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-achọ iPhone video edezi ngwa, ego a top ndepụta.
1 mbubata gị iPhone videos
Download na wụnye Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Wee pịa "Import" button Ibu Ibu iPhone Video faịlụ maka video cropping. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ-n-dobe gị video faịlụ ka usoro ihe omume.
2 Malite cropping gị iPhone videos
Ugbu a ịdọrọ gị video faịlụ site na onye ọrụ Album ka usoro iheomume. Mgbe ahụ okpukpu abụọ pịa lekwasịrị faịlụ na ị ga-ahụ "n'Ubi" button n'etiti ihuenyo ọzọ na nloghachi bọtịnụ. Pịa ya na ị ga-aga na akuku window.
Ka ị pụrụ ịhụ, e na abụọ preview windows. Onye mbụ na-enye gị a echiche nke mbụ video, mgbe nke abụọ otu egosiputa ezigbo oge mmetụta nke gị cropping mmetụta.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ma akuku aka ma ọ bụ na-akpaghị aka. Pịa 16: 9 ma ọ bụ 4: 3, gị iPhone videos ga-cropped n'ime akụkụ redio. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ aka, dị na-eji ekpe òké bọtịnụ ịdọrọ n'elu ebe na ị chọrọ idowe na video oyiyi. Wee pịa "Play" akara ngosi na-tụnyere mbụ video na cropped video, gbanwee akuku ọnọdụ, akuku obosara na akuku elu.
3 mbupụ na cropped iPhone videos
Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na N'ihi ya, pịa "Mepụta" button ịzọpụta cropped iPhone video. Gaa na "Format" taabụ, na mgbe mbupụ gị videos dị iche iche video formats gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu na cropped video na ndị ọzọ na ngwaọrụ dị ka iPod, iPad, Zune, ect, gaa na "Ngwaọrụ" taabụ ma họrọ site na listi. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike ozugbo ịkekọrịta video on YouTube, Facebook na Twitter ma ọ bụ ọkụ na-DVD diski maka egwu na TV na a DVD ọkpụkpọ.
N'ezie, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ a mma-ọgaranya video edezi ngwá ọrụ iji tinye ihe fun gị iPhone videos. Ihe atụ, ị pụrụ isonyere ọtụtụ videos ọnụ, gbawara n'etiti videos, tinye watermark ka video, mgbanwe n'okirikiri na ndị ọzọ. Download na-eme ka ị video n'ụwa ugbu a!
> Resource> iPhone> iPhone Video Cropper: Olee otú akuku iPhone Video